Impembelelo kokusiNgqongileyo kwe-SPAM Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 17, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Abantu Iphepha lewebhuFX ngeveki ndibeke ndawonye i-infographic echaza indleko yendalo ye-SPAM. Ndibhalile ngaphambili malunga I-SPAM kunye nomzi mveliso we-imeyile… Kwaye ndisamangalisiwe kukuba akukho mntu wenze inkqubela phambili ekulweni i-SPAM.
Ukuba ii-ISPs zinje ngeGoogle, Yahoo! Kwaye uMicrosoft wayefuna ngokwenene ukulahla i-SPAM, baya kunika iidilesi ezikhuselweyo ze-imeyile apho i-ISP (uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi) elawula indlela yokungena endaweni ye-ESP (uMboneleli weNkonzo ye-imeyile). Oku kuyabavumela ukuba bavimbe nawuphi na umthombo. Kodwa yeha… sinamathele kwinkqubo yeminyaka engama-20 engabonakali ngathi iyaphucuka nanini na.
Izibalo zaMazwe ngaManye imiyalezo yokuBhala